Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahay oo xirtay Mashruucii Kismaayo - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ka dib markii la diley saddex shaqaalaheena ka mid ahaa 28 Jannaayo, Hay’adda Caafimaadka ee Bani’aadamnimada ah ee Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay go’aansatey in ay xirto mashruuceedii ay ka fulineysey magaalada koonfurta Soomaaliya ku taalla ee Kismaayo.In kasta oo hawlihii Kismaayo ay joogsanayaan, haddana MSF waxa ay go’aansatey in ay daryeel caafimaad siiso dadka Soomaaliyeed, sidaa daraaddeed mashaariicda laga fulinayey degaannada kale ee Soomaaliya ka mid ah waa ay sii socon doonaan.”Kani waxa uu ahaa go’aan gaaristiisu ay aad u adkeyd,” ayuu yiri Arjan Hehenkamp, oo ah Madaxa Hawlgallada ee MSF Soomaaliya. “Waxaa jirta baahi weyn oo ay Kismaayo u qabto gargaar caafimaad oo madax bannaan, laakiin kama sii shaqeyn karno meel shaqaalaheena loogu weerarey si kas ah looguna diley si waxashnimo ah.”MSF waxa ay cambaareynaysaa weerarada ka dhanka ah shaqaalaha gargaarka ee hay’adaha bani’aadamnimada waxaana ay ka digeysaa cirib-xumada ay ku keeni karaan gaarsiinta gaargaarka dadka nugul ee Soomaaliyeed.
Soomaaliya waxa haysta dhibaatooyin aan hore u soo marin oo wata rabshado sii kordhaya, barakac ballaaran iyo baahi caafimaad oo ba’an oo aan waxba laga qaban. Boqollaal kun oo Soomaali ah ayaa qiil-qiil ku nool una baahan gargaar degdeg ah. Dadkaasi waa kuwa dhibaatadu si aan toos ahayn uga soo gaareyso weerarada lagu qaado shaqaalaha bani’aadamnimada.
Isla markii weerarku dhacayba, MSF waxa ay jooojisey joogitaankii shaqaalaheeda caalamiga ahaa ay joogeen dalka. In kasta oo ay naga go’an tahay in aan gargaarno dadka Soomaaliyeed, haddana hubinta ammaanka shaqaalaheena iyo qalabkeena/dhismayaasheena caafimaadka ayaa ah muhiimaddeena kowaad.
Todddobaadyadii la soo dhaafey, waxaa lafagur laga fiirsadey lagu sameeyey goobaha kala duwan ee dalka ee aan ka wadno mashaariicda si loo ogaado xaaladda nabadgelyo ee degaanka. MSF waxa ay hadda goobo cayiman ku celisey shaqaale kooban oo caalami ah, goobahaas oo loo arkey in xaaladahooda nabadgelyo ay yihiin kuwo la oggolaan karo.
Bishii Sebtembar 2007 MSF waxa ay shaqo ka bilowdey Kismaayo iyada oo ka furtey barnaamij qalliin ah oo bixinaya qalliin degdeg ah iyo daryeelka uureyda iyo umusha. Intii aan la xirin barnaamijka shaqaalaheena caafimaadku waxa ay fuliyeen wax ka badan 400 qalliin iyo 1200 booqasho degdeg ah.
MSF waxa ay Soomaaliya ka soo shaqeyneysey in ka badan 17 sanno, waxaana ay hadda daryeel caafimaad siissaa toban gobol oo dalka ka mid ah. Sannadkii 2007, MSF waxa ay furtey dhowr mashruuc oo cusub si ay wax uga qabato baahida ballaaran ee caafimaad iyo tan bani’aadamnimo ee ka dhashey iska hor-imaadyada socda. Kooxaha caafimaadku waxa ay fuliyeen in ka badan 2,500 qalliin iyo 520,000 qaabilaad bukaan-socod waxaana ay cusbitaallada jiifiyeen ilaa 23,000 oo bukaan-jiif.
Tags: dil shaqaale, Jubada Hoose, kismaayo, rabshado, xirid mashruuc